Qurxummii fi soora isii- Raaree (Coral) tana. Tuulaa Coral Reef kun Austiraaliyaa keessa- Great Barrier Reef jedhan
Akkuma baddaan waan lafa irra jiraa jireessitu baddaan garaba fi galaana jalaalleen bineesa bisaan jala jjireessiti.
Qurxummiin soora isii tuulaa ‘Coral Reef’ bisaan jala jiran keessaa argatti. ‘Coral Reef’ jennu tun waan akka raareeti afaan saayinsitiiin ammoo akka bineessaansaatti herregamti.
Soortii qurxummiin garba keessaa nyaatu Raaree(Coral) yoo oowwaan gogu akkana jira.
​Soortii qurxummiin tun ganna lamaa fi sadiin duratti oowwa qilleensa haga dabaree bisaan garbaa fi galaanaa oowwiseen akka malee goddee dhiqamtee badde.Qurxummii miliyoona hedduutti tanaaf jedhee garba dhibiitti baqattee taan ammaa waan nuyaattu dhabdee dhumte.
Raareen ykn soortii qurxummii Coral Reef jedhan tun garba addunyaa ka akka
Awustiraaliyaa keessaatti Great Barreif Reef,Paasifik,Indiyaan,Atlaantik,Galaana Diimaa,Corlal See (Awustiraaliyaa) fi fulaa hedduu keessa jirti.Ka Awustiraliyaa kun garba Awustiralaiyaa keessatti km kuma 23 irra jira.
Akka ogeeyyootii dhaaba hawaaa fi qilleensa Amerikaa NOHAA jedhanitti tuulaan soora qurxummii tun amma dhiqamuu ya dhiifte. Qurxunniin waan nyaattu hin dhabduu jechuu.
Qurxummiin waan nyaattu dhabuun warrii jireennii isaanii kanaan bulu hin rakkataa,akka harooleen hin dhiqamen tolchitii,akka bisaan namatti hin baafanne qabdii,garba qabbaneesitii faaydaa hedduu irraa argatan.
Mark Eakn dhaaba Tohannoo Hawaa fi Qilleensa Amerikaa(NOAA) keessatti itti gaafatmaaa sagantaa tohannaa ‘Coral Reef.’
"Garba Paasifik keessaa fulaa soortii qurxummii tun akkuma jirtuunitti dhiqamtee keessaa baddetti jira,” jedha saayintistiin NOAA Eakin.
Dhiqamii tun qurxummii achii balleessaa jarii jireennii isaanii qurxummiin jiruu irraa badee jechuu.
Tuulaan soora qurxummii ingiliffaan Coral jedhan kun nyaata qurxummii fi dahoo isii qora mitii ilmee namaatiifuu faaydaa hedduu kenna
Fulaa tokko tokkotti ammoo harooleen silaa waan hedduuf herregatanillee duuda.Tun baddee jechuun ammoo namii silaa biyya daawwii dhufu,ka haroolee akkasii keessatti gammachuuf dhufullee biyya daawwachuuf hin dhufu.
Bara 2014 asitti Coral(Raaree) hedduutti dhiqamee bade walumattu yoo deebisan harka 70 dhiqame.
Amerikaa keessaa haroolee godina Filooridaa. Hawaahii, Iddoolaa Guwaamii fi Mariyaanaa fa keessaa dhiqamtee badde.
Saayintistootii addunuyaa ammoo akka Coral dhiqamuutti jiraachuu fi dhibaachuu isaani tohachumatti jiran.